Barlamaanka Kenya oo ku baaqay in Ciiddanka KDF loo daad-gureey xuduud-baddeedka lagu murunsan yahay | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Barlamaanka Kenya oo ku baaqay in Ciiddanka KDF loo daad-gureey xuduud-baddeedka lagu...
Barlamaanka Kenya oo ku baaqay in Ciiddanka KDF loo daad-gureey xuduud-baddeedka lagu murunsan yahay
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca iyo Xiriirka Dibedda ee dalka Kenya, Ndung’u Gethenji ayaa ku taliyey inay Xukuumadda Kenya u daabusho Ciiddan ka tirsan Milliteriga Kenya xuduud-baddeedka Badweynta Hindiya ee ay Somalia ku murunsan yihiin.
Waxa uu ku eedeeyey Somalia oo uu ku tilmaamay inay hoy u tahay Alshabaab inay qorsheynayaan inay la wareen xuduud-baddeedkaasi, waa sida uu hadalka u yiri.
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca iyo Xiriirka Dibedda ee dalka Kenya waxa uu sheegay in falka ay Somalia xilligan ku sheeganayso xuduud-baddeedkaasi lagu soo beegay xilli ay Dagaalamayaasha Alshabaab ballaariyeen weeraradda ay ka geystaan gudaha Kenya, waa sida uu hadalka u dhigay.
“Xeebta waa xeebta Kenya, waana in Milliteriga Difaaca Kenya loo daad-gureeyaa halkaasi si loo hubiyo ammaanka marin-baddeedkeenna” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Difaaca iyo Xiriirka Dibedda ee dalka Kenya.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay, iyadoo ay Dowladda Somalia bishan July 13-dii dacwad ka dhan ah Dowladda Kenya u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ee Garsoorka ee ICJ oo uu fadhigeeda dhexe ku yaalla magaalladda The Hague ee dalka Netherlands.
Sarkaalka Maxkamadda ICJ ugu qaabilsan Arrimaha Warfaafinta ayaa sheegay inay Dowladda Somalia dacwad ka soo gudbisay Muranka xuduud-baddeedka kala dheexeeyo Dowladda Kenya.
Sarkaalka waxa uu Dowladda Kenya ku wargeliyey inay Sheegashadooda xuduud-baddeedka lagu murunsan yahay u soo gudbiyaan Maxkamadda ICJ ugu dambeyn bisha Maarso ee sannadka soo socda, si loo guda-galo dhegeysiga Dacwaddaasi.
Si kastaba ha ahaatee, muranka Lahaanshaha xuduud-baddeedka saddex-geesoodka oo dhererkiisu dhan yahay in ka badan 100,000 oo KM oo isku wareeg ah, ayaa la sheegay inay ka buuxaan Shidaal iyo Gaaska Dabiiciga.